ရွာသူ/သားများ အတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computer & Cell Phone » ရွာသူ/သားများ အတွက်
Posted by စိန်ကြက်ဆင် on May 22, 2013 in Computer & Cell Phone, Software & Links | 20 comments
အသုံးတည့်နိူင်မည့် Software ..... ( for phone )
ကျနော် အခုတင်ပြချင်တာကတော့ facebook အကောင့်တခုရှိယုံနဲ့ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစု၊ ချစ်သူရည်းစား၊ ရပ်နီးရပ်ဝေး တွေအတွက် အသုံးတည့်နိူင်မဲ့ လတ်တလောမှာ အသုံးတွင်ကျယ်နေတဲ့ Wechat လို့ခေါ်တဲ့ ဖုန်းတွင်းသုံး ဆော့ဖ်ဝဲလေး တခုအကြောင်းပါ ခင်ဗျ။ တချို့များလဲ သိပီးသား သုံးဖူးပီးသား ဖြစ်နေမှာပါ၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော် တွေ့ရသလောက်တော့ သိပ်အသုံး မတွင်ကျယ်သေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ မန်းလေးမှာတော့ ကျနော်နဲ့ ကျနော့် သူငယ်ချင်း မိသားစုတွေ တော်တော်များများ သုံးနေကြပါတယ်။ အင်တာနက် ကော်နက်ရှင် သိပ်မကောင်းရင်တောင် အသုံးပြုနိူင်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ Wechat ကို လူတော်တော်များ မကြိုက်နှစ်သက်တာကတော့ တရုတ်ပြည်က Developer တွေလုပ်ထားတာကတကြောင်း၊ တရုတ်စာနဲ့ပဲ ရတာကတကြောင်း၊ အကောင့် Sign up လုပ်ရတာကလဲ တရုတ်ဖုန်းနံပါတ် တလုံး လိုနေတာကြောင့် မန်းလေးက လူတော်တော်များသာ သိကြပီး၊ တရုတ်ပြည်နဲ့ အဆက်အသွယ် ရှိသူတွေပဲ လုပ်ငန်းကိစ္စ၊ ပါဆင်နယ်ကိစ္စတွေ အသုံးများပါတယ်။
ခုချိန်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ အင်တာနေရှင်နယ် သုံးနိူင်ပီမို့ ( ဖုန်းထဲတွင် ဗမာဖောင့်ပါ ရလို့ ) အရင်လို တရုတ်ဖုန်းနံပါတ်မလို Facebook အကောင့်တခုနဲ့တင် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိူင်ပီ ဖြစ်ပါတယ်၊ နောက်တခုက Apple device, Android device ၂ခုစလုံးအတွက် ထွက်လာပီမို့ အားလုံး အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့ လူကြီး လူငယ် မရွေး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ သာမာန် Gtalk သုံးသလိုမျိုး လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးပြုနိူင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ကျနော် ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်ထားပေးပါတယ်။ အသစ်အဆန်း စိတ်ဝင်စားသူများ www.wechat.com မှာ ဒေါင်းလွတ်ရယူနိူင်သလို မိမိဖုန်းအတွင်းရှိ Google Play，Anzhi , Apple Store အစရှိတဲ့ မိုဘိုင်း အပလီကေးရှင်း မားကတ်တွေမှာလဲ အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ် ရယူနိူင်ပါတယ်။
www.wechat.com ရဲ့ ပထမဆုံး မြင်ရမဲ့ မူလစာမျက်နှာ
ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ဆိုင်းအပ် လုပ်မှာထက် ပိုလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း
အဲ အောက်မှာ ထပ်ပီး တချို့ကို ဘယ်လို သုံးသလဲ ဆိုတာလေး ပုံလေးနဲ့ ပြထားပါတယ်ခင်ဗျ …………။
ကိုယ့်ပတ်ဝင်းကျင်မှာ အနည်းဆုံး မီတာ၁၀၀ကနေ အများဆုံး မီတာ ၁၀၀၀ အထိ အသုံးပြုသူတွေကို ရှာနိူင်ပါတယ်
Push to talk လို့ပြောရမဲ့ voice chat
party member အချင်းချင်း ဓာတ်ပုံ အသံဖိုင် အစရှိသဖြင့် ပို့နိူင်တယ်
စုံတွဲတွေအတွက် 。。。 ကွိကွိ
ဟုတ်ကဲ့ပါ ပိတ်သတ်ကြီး ခင်ဗျာ 。。。。 ဂလောက်ဆိုရင်ဖြင့် အခက်အခဲမရှိ ဆိုရှယ်ဆော့ဖ်ဝဲလေးတခုကို လွယ်လွယ်ကူကူ မိမိနဲ့ မိမိပတ်ဝင်းကျင်ရှိ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေအကြား အသုံးပြုနိူင်မှာပါ ……။
ဥပမာ အားဖြင့် ပြောရမယ် ဆိုရင်ဖြင့် Voice Chat ကိုသုံးပီး ” သဂျီး …. သဂျီး ပွိုင့် ၁သိန်းပြည့်ပီ ပေးတော့လို့ … ” သူအိပ်နေတုန်း မက်ဆေ့ပို့ထားနိူင်သလို ပြန်မဖြေက emotion ပုံလေးတွေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်နိူင်ပါတယ်။
Live Chat ကတော့ ကိုအောင်ပုအတွက် ပိုအသုံးတည့်မယ် ထင်ပါတယ်၊ သူများအီအီးပါနေတာတွေ မူးပီးဂွေးဇိပေါ်နေတာတွေကို ချောင်းရိုက်စရာ မလိုဘဲ ကိုယ့်ဟာကို ရိုက်ပီး အမြင်ကပ်သူများ ဆီသို့ ပို့ပေးနိူင်ကြောင်းရယ်ပါ။
အစားအသောက်မက်သူတွေကလဲ Group Chat မှာ ဘယ်လောက် ငတ်ချီးကြတယ်ဆိုတာ သူများတွေ မနာလိုအောင် တဖုန်းဖုန်း ဓာတ်ပုံတွေ တင်ပီး ….. ညှော်နိူင်ပါတယ် ခင်ဗျ ……
ကျနော့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ … ရွာသူ/သား အချင်းချင်း ဗဲဒီးကလို့စ် ကွန်မြူနီကေးရှင်း တည်ဆောက်နိူင်စေဖို့ပါဘဲ ……
အဲ ….. သတိထားရမဲ့ အချက်ကတော့ ပထမဆုံး ကိုယ့်အကောင့်ကို တည်ဆောက်တဲ့အချိန် ပေးမဲ့ User name နဲ့ ID မှာပေါ်မဲ့ နာမည်ကို တခုတည်း ဖြစ်စေလိုပါတယ်။ ၂ခုဖြစ်နေရင်လဲ အချင်းချင်း invite လုပ်တဲ့အခါ မှတ်မိနေဖို့ လိုပါတယ် …… ။
ဥပမာ အားဖြင့် ကျနော့်ကို ရှာချင်တယ်ဆိုရင် …… ကျနော့် Nick Name ( or ) User Name က Yee Xie ဖြစ်ပေမဲ့ တကယ်ရှာရမှာက yeexie01 (or) yeetecentdev (or) yeedev024 ဖြင့်ရှာနိူင်ပါတယ် ခင်ဗျ 。。。。。။
နောက်ဆုံး အထူးတလည် မေတ္တာရပ်ခံခြင်တာကတော့ Wechat ကို www.wechat.com မှဖြစ်စေ၊ မိမိဖုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော App Store for iTunes, Google Play Store for Android, BlackBerry App World and Marketplace for Windows Phone တို့မှ ဒေါင်းလုပ်သော်လည်ကောင်း၊ www.myanmarmobileapplication.com တို့မှ အလဂါး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲစေချင်ပါတယ်ခင်ည။ တည့်တည့်ပြောရရင် တယောက်က ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပီး Zapya နဲ့ Share ခြင်း မလုပ်ကြဖို့ အထူးပန်ကြားလိုပါတယ် ခင်ဗျ ။
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက http://www.wechat.com , http://www.en.wikipedia.org/wiki/WeChat တို့တွင် ၀င်ရောက်လေ့လာနိူင်ပါသည်။
မန်းဂဇာတ် ပိတ်သတ်ကြီး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ …………..။
PS>> အထက်ပါ အကြောင်းအရာများကို ရေးသားရန်အတွက် dev.team ထံတွင် ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံပီးဖြစ်ကြောင်း 。。。。。。
တော်ကြာ ပြဿနာက ကိုယ့်ဘက် လှည့်လာမှာစိုးလို့ 。。。。 ကွိ ကွိ ( ခရရ်ဒစ်ထ် တူ ကိုအောင်ပု )
လာပီ နောက်တထု ဟိ
ကျုပ် လက်ချိ လိုင်းရယ် ဗိုက်ဘာရယ် အိုင်အမ်ပလပ်စ် ရယ် တန်ဂို ရယ် ဖရီးပီပီရယ် စကိုက် ရယ် နဲ့
တလတလ ဒေတာပလင်န်က ကျော်ကျော်ကုန် လို့ ဒတ်ကျနေဒယ်အေ…
အပြာကားလေးတွေ ကျိတာလည်း ပါသပေါ့..
အိုး 。。。 အာကို့
သာမီးတို့ ပစ်ဆီးဂို စမ်းသုံးပေးပါနော့ အ。。ကို :harr:
ဗိုက်ဘာရယ် အိုင်အမ်ပလပ်စ် ရယ် တန်ဂို ရယ် ဖရီးပီပီရယ် စကိုက် ရယ်
တကယ်သုံးကြည့်လိုက်ဗျာ …. အတည်ပြောတာ …. သူ့သုံးပီးရင်တော့ ကျန်တာတွေ လွှတ်ချထားလို့ ရပီ
ချက်လုပ်တာ ဝေးနိုင်သမျှဝေးပြောတာအကောင်း ဆုံးဘဲ။
မဟုတ်လို့ ဒေါသ ထွက်လာရင် ပြေးရိုက်မိ နေဦးမယ်။
ဒါကို ဘာကြောင့်များ အနီး အဝေးပြနေရသလဲ မသိ။
ရွာထဲမှာတောင် အရှေ့ အနောက် အတော် ဝေးနေလို့။
ဒင်းတို့ ၂ကောင် က ထိပ်ဆုံး စာရင်းထဲမှာ။
သားက စေတနာနဲ့ ပြောဒဲ့ဟာဂို ….
အဲ့လာလေး …..သုံးထားရင် ဘယ်လို အဆင်ပြေလဲ ဆိုတော့ ….
ကျွိ …ကျွိ ….ကျွှိး!!!!!! (နိူတီဖီကေးရှင်းအသံ)
ဟဲ့ ၆ပလုပ်တုတ် !!!!!! (အိပ်မှုံစုံမွှားနဲ့ ဖုံးဖွင့် ..)
“ အရီး …အရီး !!!!!! ရွာမီးလောင်နေပီ!!!!!” ( မျက်လုံးတွေ ပြူးသွား )
ကိုယ်ကလဲ ” ဘယ်ယ်ယ်ယ်ယ် … သူ … တွေ ရှို့တာလဲ .. ပြန်မေး ”
” ယဲဆီတို့တဲ့ …. ယဲဆီတို့တဲ့ ….. ” ( လုံးဝတင်းသွါးဘီ ：evil: … )
အဲ့မှာ ခုတင်ပေါ်က ခုန်ထ မျက်မှန်မတပ်သေးခင် … ခုပြောတာဘယ်သူလဲ .. ယွှေတိုက်လား ….????
တဖက်မှ အသံဝင်လာ …. “ ကျနော် ယဲဆီပါ အရီး …:mrgreen: ”
ဟယ် … xxသာလေး … @!%# 。。。。 %^#& …..
ကဲ … ဘယ်လောက် အသုံးတည့်လဲ …. စမ်းသုံးကြည့်ပါ အရီးရယ် … နော် .. နော်
Nick – Xernie
အခုပဲ ကိုဂီကို add လိုက်ပါတယ် …….
ချက်ခြင်းကို လက်ခံလိုက်ဘာဒယ် ဂျစ်ယေးးးရယ်..
၁) လိုင်း၊ (ဟိုလိုင်းနဲ့ မရောနဲ့နော်)
၂) တန်ဂို (ကျုပ် မာမားနဲ့ ပြောတာ, ဘီဒီယိုကော(လ)
၃) ဝှတ်(စ) အက်(ပ) (တနယ်ချင်းတွေက ဒီထဲမှာ)
၄) ဗိုက်ပါ (အဲလာလေးမှာ ချစ်တူရှိတယ်)
၆) တော့(ခ) လိုက် (လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို မြင်ရမကျင်ရတာ ဒင်းပေါ့)
၇) ဖဘ မက်စင်းဂျာ
၈) အိုင် အမ် အို ဆိုလား ရှိသေးတယ်။
၉) ခု ဝီချက်ပါ ဆိုရင်တော့ ။။။။။။။။။။။။။။.
ဖေ့ဘုတ် ၃ ခုနဲ့ ဂျီတော့ ၃ ခု လောက်က ရှိသေး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေရင် အကြောင်းပြန်မယ်။
အပေါ်မှာ ပြောပီးသွားဘီ ……
အဲ့ … ခင်ဗျားမှာ ရှိသမျှ ဟာတွေကို ဒီတခုထဲနဲ့ သုံးလို့ရပါတယ်လို့ ဆိုနေမှ …… ：(
တယ်ပိန်းသဂိုး …. ကျနော်လဲ အစက အကုန်အစုံ လိုက်သုံးနေတာ … ခုတော့ အိုကေတွားဘီ
ဖုန်းတွေ အင်တာနက်မရခင်က အိမ်က မာမားဆို အင်တာနက်ဆိုင် ပြေးပြေး အော်ရတာ မှန်ချိုတောင် ဆောင်ထားရတယ် …. ခုတော့ အိမ်မှာဘဲ ထိုင်ရမထ အေးချေး …. တခါတလေ ကိုယ်ကခေါ်ရင်တောင် ကိုရီးယားဇာတ်လမ်း ကြည့်နေတာ မအားသေးလို့ ဆိုလားဘဲ :harr:
ဗွီဒိုကောလ်တော့ မခေါ်ဖြစ်ဘူး ….. မာမားက နင့်၆ခွက် မဲမဲဂျီး မကြည့်ချင်လို့တဲ့ ….. တိန်
အဲဂလို နည်းပညာတွေ ဝေးပါတယ် ဆို။
ကျုပ်က ဒါသုံးမယ် ဆိုရင် ဟို ဘက်ကိုရော ဒါပဲ သုံးခိုင်းရမှာပေါ့ နော့။
ဟုတ်ပါတယ် … အမ
ဟိုဘက်ရော wechat သုံးရမှာပါ …..
zapya သုံး ရင် ဘလူးတု ပျက် တတ် တယ် ဆိုလို့၊ သုံးကို မသုံးတာဗျာ
ဆိုတော့က bluetooth နဲ့ ပဲ ၊ ကူးလိုက်ပါမယ်နော
စကားမစပ် ကယွဲစီ …
ခု ဖဘ မှာ ဘာခေတ်စားနေလဲသိလား
နာမည်မသိသေးတဲ့ လူရွှင်တော် အငယ်တယောက်ပဲဗျ …
ကျော်ဟိန်း အသံ နဲ့ ၀င်းဦးအသံ လုပ်ပြတယ် လေ…
တကယ်က အငြိမ့်ခွင် တခုထဲက အတိုလေး ဖြတ်တင်ထားတာပါဗျာ…
(လူရွှင်တော် ဦးပေါ်လေး နဲ့အတူ ပြက်တဲ့အခန်းပေါ့)
အိုက်ဒါဗျာ ..ကျော်ဟိန်းသံ တဲ့ ..ဘာတဲ့ အသံကြီးကြီး (ဘယ်သံများများ)
ကို သွားစေ့ပြီး ပြောတာတဲ့ …သူ တူအောင် ပြောပြတာ လူတွေကို အူကိုတက်လို့…
အိုက်ဒါ ပိုစ့်နဲ့ ဘာဆိုင်တုန်း မေးရင် ပြောပါ့မယ်..ဟိ
မနေ့ညနေက ခညား ကျုပ်ကို ကျုပ်ရထားစီးဒုံး …
ဗွိုက် မက်စိ ပို့ဒါလေ.. အိုက်ဒိ အသံမှ အိုက်ဒိ အသံဗျာ…
အရပ်ကတို့ရေ … ကယွဲစီ အသံကလေ သိလား
ကျော်ဟိန်းသံ မှ ကျော်ဟိန်းသံ (မှတ်ချက်။ခါချဉ်၅ကောင် ကောင်းမှု လားမဆိုနိုင်)
P.S ဦးပဇဉ်းကြီး ခလုတ်တိုက်မိရင် တာဝန်မယူ။
မတူပါဘူးအေ …….. ငါ့အသံ ငါ ခွေးချီတာတောင် မှတ်မိတယ် ….။
ခလေးမကြီး/သေး တော်တော်များ ကျုပ်အသံကို …. ခိုက်သတဲ့ … အဟိ
ရုပ်လည်း မြင်ရော …. ပြေးတာမှ တကျိုးတည်း …. ဟေ ဟေ့
စမ်း ကြည့်အုံးမှ ပဲ၊ ဟေ့သူငယ် ဘာတွေ စမ်းနေတာလဲ၊ အဲအဲ …ငါ့ …ငါ့ .ထီးကြီးဟ… အော်..ခက်တော့ဒါပဲ
မမပြာပြောလို့ အိုက်ဝီချက်ကို ကလိနေတာ…. ဟို အညင်ကပ်စရာကောင်းဒဲ့ … ဒယ်အိုးဖင်လိုပိတုန်းရောင် အသားပိုင်ရှင်တွေ ဂရီးဒင်းလာလာလုပ်တယ် … ..
မမပြာက … ဖုန်းကို shake ဆိုလို့ … shake လိုက်ပါတယ် … ပေါ်လာတဲ့ လူတွေကလည်း .. သပိတ်ရောင်အသားနဲ့ အိမ်နီးချင်းကဟာဒွေ … ။ ပေါ်လာပါလား …. ကကြီးလို လှတပတလေးတွေ … အဟွမ်း .. ဒီတော့.. အကောင့်လုပ်ပီး တရက်လားနှစ်ရက်လားပဲ .. ဆော့ဖြစ်တယ် … ခုတော့ … sign out လုပ်ထားတယ် .. ခွိခွိ … ။
တခါက .. 10 Km က တယောက်လာခေါ်လို့ … ရိုးရိုးလေးမေးလိုက်ပါတယ် .. နင်ဘယ်နားကလဲ ဆိုတော့ .. မြေနီကုန်းကတဲ့ …. ။ အိုက် အကွာဝေးတွေက ဟုတ်ရော ဟုတ်ရဲ့လား သိပါဝူး ….. ။
ရွာသူားတွေ အတွက်ဆိုဒေါ့ …
သုံးဖူးလား .. သိဒလား ဆိုဒေါ့ ..
သိဝူးး .. သုံးဖူးဘူး ….
ခီညားဂ ညွှန်းထားဒါဆိုဒေါ့ စမ်းဒေါ့ သုံးကျိမလားလို့ဘဲ …
((ဘာမွှ မဟုတ်ဘူး .. ထင်ပီး လေပေါကျိဒါ))
ခင်ညား အကောင့် ကို အက် လို့ရဘူး။ ကရဲစည်။
၃ ခုလုံး ရဘူးရယ်။